फाइनलमा आयोजक र पुलिस भिड्ने - Purbeli News
फाइनलमा आयोजक र पुलिस भिड्ने
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ३०, २०७४ समय: १९:२४:४७
धरान । प्रदेश नं. १ स्तरीय दोस्रो पानवारी भलिवल प्रतियोगिताको फाइनलमा आयोजक टिम सयपत्री बोइज युनियन क्लबव र विभागीय टिम प्रहरी बिच प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । आइतबार धरान–६ स्थित सिमलचौरी खेल मैदानमा भइरहेको प्रतियोगितामा दुवै टोलीले सेमिफाइनलमा जित निकालेर फाइनल यात्रा तय गरेका हुन् ।
आइतबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आयोजक सयपत्री बोइज युनियन क्लबले धरान भलिबल क्लबलाई ३–१ को सेटमा हराउदै फाइनल पुगेको हो । आयोजकले पहिलो सेट २५–२३ ले जितेको थियो भने दोस्रो सेट १९–२५ ले हारेको थियो । अत्यन्तै प्रतिष्पर्धात्मक रहेको खेलको तेस्रो सेट आयोजक टिमले २६–२४ ले आफ्नो पक्षमा पार्न सफ भएको थियो ।
खेलको चौथो सेट भने आयोजक टिमले अघिल्लो सेटको तुलनामा सहज जित दर्ता ग¥यो । आयोजकले चौथो सेट २५–२० ले जित्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो । खेलको म्यान अफ द म्याच आयोजक टिमका स्पाइकर आतिस मगर घोषित भएका थिए ।
त्यस्तै गरी आइतबार नै भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा सघर्षपूर्ण जित निकाल्दै १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय रानी टिम फाइनल पुगेको छ । प्रहरीले झापा टाइगरलाई ३–२ सेटले पराजित गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो सेट गुमाएको प्रहरीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै झापालाई स्तब्ध पारेको थियो । पहिलो सेट प्रहरीले २२–२५ ले गुमाएको थियो भने दोस्रो सेट १८–२५ ले गुमाएको थियो ।
दोस्रो सेट गुमाएपछि प्रहरीले खेलमा लय समाउदै झापालाई तेस्रो सेटमा सहजै जितेको थियो । तेस्रो सेट प्रहरीले २५–१७ ले जितेको थियो । चौथो सेट एकदमै प्रतिष्पर्धात्मक रहेको खेलमा प्रहरीले २६–२४ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । खेलको अन्तिम तथा निर्णायक सेटमा प्रहरीले १५–१२ ले पाखा लगाउदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । खेलको म्यान अफ द म्याच झापाका आशिष कार्की घोषित भएका थिए । गतवर्ष झापा टाइगरलाई नै सेमिफाइनलमा पराजित गरी प्रहरी टोली फाइनलमा पुगको थियो भने फाइनलमा डुम्राहा भलिबल क्लबसँग पराजित भएको थियो ।
फाइनल मंगलबार विहान १० बजेदेखि सुरु हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रतियोगिताको विजेता टिमले ३५ तोलाको चाँदीको रनिङ ट्रफिका साथै नगद रु ५१ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो हुने टिमले नगद रु ३१ हजार पुरस्कारका साथै ट्रफि र मेडल प्रदान गरिने प्रतियोगिताका खेल संयोजक राजेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यागत उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गरिने समेत आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रतियोगितामा प्रदेश नं. १ का विभिन्न १२ टिमको सहभागिता रहेको थियो ।
पूर्वका प्रमुख धार्मिक गन्तव्य स्थलको प्रचारका लागि बोलमेलामा सूचना केन्द्र राखिने
धरान १४ बाल मैत्री वडा घोषणा
वीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार प्रकरण : मन्त्रिपरिषदले गठन गर्याे छानविन समिति
धरानका अधिकांश व्यापारीले उपभाेक्ताकाे स्वास्थ्यमा खेलबार्ड गरेकाे खुलासा, भाटभाटेनीमा भेटियाे कुहिएको सागसब्जी र फलफूल
प्रदेश सरकार किसानको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री राई
धरान १४ आजबाट पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा
धरान प्रहरीद्वारा हराएको मोवाइल बरामद गरी मोवाइल धनीलाई फिर्ता
खाजा भत्ता कटाएर धरानका प्रहरीद्वारा मृगौला पीडितलाई सहयोग
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडा विवाद अदालतमा
सगुनमा क्षमता अनुसार केही रकम लगानी गर्नु उपयुत्त : एनआरएन पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महत्तो (भिडियाे सहित)
भुँडी घटाउन भात कि रोटी ?
अहिलेको पुस्ता : प्रेममा उदार, सेक्समा सावधान !
कर्णालीबासीलाई अश्रुग्यास उपहार